Home » Creative Writing » အိမ်
Posted by Shwe Ei on Mar 13, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 44 comments
ဟိုတလောလေးက ရွာထဲမှာ ခရီးသွားပို့စ်တွေ တက်လာတာကြည့်လိုက် အားကျလိုက် နဲ့ ကိုယ်တိုင်သွားနိုင်တဲ့ ပြည်တွင်းခရီးစဉ်တွေတော့ အားပါတရသွားပလိုက်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းခရီးစဉ်ဆိုလို့ မြန်မာပြည်အနှံ့ ခြေဆန့်တယ်တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ ရွာပြန်တာဘာ(မကွေး) ။ ရွာမပြန်ခင် ကျိုက်ထီးရိုး မော်လမြိုင် ကျိုက်ခမီ စက်စဲလဲရောက်ခဲ့သေးတယ်ဗျ။ ကြွားတယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့ (ခိခိ ကြွားတာဘာ)။
အဲ ရွာပြန်တာကလဲ ခရီးလဲထွက်ရင်း တချက်ခုတ်၂ချက်ပြတ်ဖြစ်သွားအောင်(အခေါက်ခေါက် အခါခါလဲ မသွားနိုင်ဘူးကိုး)၊ ပုံစံ ၁၇ လုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်တာ(နိုင်ငံခြား ခရီးများထွက်ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော်ပေါ့လေ)။ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတေ စဉ်ကြည့်လို့က်တော့
၁) အိမ်ထောင်စုဇယား (ပုံစံ၁၀)
၂) ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ (အမှန်တကယ်နေထိုင်ကြောင်း)
၃) ရဲစခန်းထောက်ခံစာ (ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း)
အွန်း စုံသလောက်တော့ရှိဘီ။ အညာမှာနေပြီး ဆိုင်ကယ်စီးမကျွမ်းတဲ့ ပြသနာဘဲရှိတော့တယ်။
အိမ်က အမ၀မ်းကွဲကိုဘဲ ဒွတ်ခပေးရတာပေါ့လေ။ ဘယ်တတ်နိုင်မတုန်း၊ ၁နှစ်မှ၁ခါ ပြန်လာပြီး ဒွတ်ခပေးတာဆိုတော့ မငြိုငြင်ရှာပါဘူး။ ရပ်ကွက်ရုံး၊ ပြီးတော့ ရဲစခန်း ပြီးတော့ မြို့နယ် အခွန်ရုံးကို ချီတက်လာခဲ့တယ်။ စာရွက်စာတမ်းကတော့ စုံပါရဲ့ မှတ်ပုံတင်က ဆယ်တန်းမဖြေခင်လုပ်ထားတဲ့ တခုဖြစ်နေလို့ တဲ့။ ကွိုင်ဘဲ။ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်လျှင် လဲလှယ်ရမည်ဆိုတဲ့ စာတမ်းကြီးနဲ့။ ခက်ကပြီ။
ဆိုတော့ ရောက်လက်စနဲ့ မထူးပါဘူး။ လ၀က ရုံးကိုချီတက်တာပေါ့။ ၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးကြောင်း မှတ်ပုံတင်လဲချင်ကြောင်း ဘာတေလိုအပ်မလဲ မေးကြည့်လိုက်တော့
၂) အဖေ၊ အမေ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
၄) ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ (အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးကြောင်း)
ရပ်ကွက်လူကြီးရဲ့မှတ်ချက်လေးရော ကြားချင်ပါသေးလား ပိတ်သတ်ကြီး။ ကျုပ်က ဘာကိုကြည့်ပြီး အသက် ၁၈နှစ်ပြည့်ပြ်ီးကြောင်း ထောက်ခံပေးရမှာတုန်းအေ တဲ့။
မှတ်ပုံတင်မှာ မွေးသက္ကရာဇ်ပါပါတယ် ဦးလေးရယ်လို့ပြောတော့၊ အေးလေတဲ့ အိုက်ဒါ သူတို့လဲကြည့်တတ်တာဘဲကိုတဲ့။ အွန်း ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာတော့ပါမှဖြစ်မှာမို့ဘာလို့ ရှင်းပြလိုက်ရတယ်။
နိုင်ငံခြားသွားမှာဆိုရင်လဲ မသွားခင်တခါ ပြန်လာရင်တခါ ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားအုံးနော် သမီး တဲ့။ အူးလေးတို့ အထက်ကို သတင်းပို့ရမှာမို့လို့တဲ့။ ဘာဘဲ ဖစ်ဖစ် ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောခဲ့လိုက်တယ်။ ထောက်ခံစာရဖို့ အရေးကြီးတာကိုး။
ရပ်ကွက်လူကြီးဆီမှာ အလှူငွေထည့်စရာ မလိုဘဲ ထောက်ခံစာ ၂ခါတောင်းတာ ၂ခါလုံးရှောရှောရှူရှူ ထုတ်ပေးလိုက်ရဲ့သားနဲ့ဗျာ၊ လ၀က ကျမှ ပြသနာတက်တယ်။ တကယ်ပါဘဲ။
ဈေးလယ်စိုး ၊ မစိုးရိမ်၊ အလယ်ရပ် ဆိုပြီး ရပ်ကွက် သုံးခုစာ စာရင်းကိုင်ရတဲ့ မမဆီ နောက်တခေါက်ပြန်ရောက်လာတော့ လက်ထဲမှာ စာရွက်စာတမ်းအစုံနဲ့ပေါ့လေ။
အိမ်ထောင်စုဇယားကို တချက်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဈေးလယ်စိုးလို့ ရေးထားတဲ့ စက္ကူဖိုင်တခုထုတ်လာပြီး စာရွက်ဝါကျင်ကျင်တေ ဖြူရော်ရော်တေကို ဂရုတစိုက် တရွက်ချင်းလှန်တယ်။
ပြီးတော့ ပြောလိုက်တာက… ညဉ်းတို့ အိမ်ထောင်စုစာရင်းက ပယ်တဲ့အထဲပါသွားဘီအေ့ တဲ့။
ဘလိုဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက အိမ်(မကွေး)မှာ မရှိကြဘူးမို့လား တဲ့။ အိုက်ဒါကြောင့် ပယ်လိုက်တာတဲ့။ ကူကယ်ရာမဲ့ မျက်နှာပေးနဲ့ဘဲ သူ့ကိုပြူးကြည့်နေလိုက်တော့တယ်။
လ၀က ဦးစီးမှူးကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးပြီးထုတ်ပေးထာတဲ့ အိမ်ထောင်စုဇယားဆိုတဲ့ စာရွက်ကြီးကို စာရေးမပါးစပ်က ပယ်လိုက်ပြီလို့ပြောရုံနဲ့ အမှိုက်ပုံးထဲလွှင့်ပစ်ရတော့မဲ့အခြေဆိုက်နေပါရောလား။
အဲဒီတော့ နောက်တမျိုးပြောလာတယ်။ နေအုံး.. ပယ်ထားတဲ့ ဖိုင်တေထဲမှာ ရှိရင်တော့ ရသေးတယ်။
ညဉ်းတို့ ဖာသာရှာကြတော့။ ကျုပ်ဖိုင်ယူလာပေးမယ် တဲ့။ ဟုတ်ကဲ့ ကိုယ့်အိမ်ထောင်စုစာရင်းတွေ့ဖို့က အဓိကမဟုတ်လား ခညာ။ အပယ်ခံဖိုင် လေး ငါးဖိုင်လောက်ယူလားပြီး မျက်စိညောင်းအောင် ရှာကြပါသော်လည်း မတွေ့။
ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ အမရယ်ဆိုတော့ … မိသားစုလိုက် အထွက်ပြလိုက်ပေါ့အေ။ ဒီကနေ ထွက်စာရိုက်ပေးလိုက်မယ်။ ရန်ကုန်ဆိုလဲ ရန်ကုန် မန်းလေးဆိုလဲ မန်းလေးပေါ့။ ဟိုကျမှ မြို့နယ် လ၀က ကိုသွားပြီး အိမ်ထောင်စုစာရင်း အသစ်ပြန်လျှောက်ပေါ့တဲ့။ ဟိုက်ရော လွယ်မလိုနဲ့ အတော်ခက်တဲ့ကိတ်စနော။
ဖြစ်နေတဲ့ ပြသနာကလဲ အိမ်မှာ မိသားစု (၇) ယောက်ရှိတယ်။ အဖေက နောက်အိမ်ထောင်နဲ့ သူ့မိသားစုနဲ့ ပဲခူးမှာ အခြေကျနေဘီ။
အမေ့အတွက်က အိမ်ထောင်စုစာရင်းမလိုတော့ဝူး။ သူ့အမေ(ကျမအဖွား)အိမ်မှာ ရှိပြီးသား။
အကိုအကြီးဆုံးက သူ့မိသားစုနဲ့ မိတ္ထီလာမှာ၊ အမအကြီးက သူ့မိသားစုနဲ့ ရန်ကုန်မှာ နောက်အမတယောက်က သူ့မိသားစုနဲ့ မန်းလေးမှာ။ ကျမ ညီမ အငယ်ဆုံးက အဖေတို့ ရွာမှာ အဖေ့ညီမ အပျိုကြီးတေရဲ့ အိမ်ထောင်စုစာရင်းထဲမှာ ရှိပြီးသား။ လွတ်နေတာက ကျမတယောက်ထဲ။ ကတောက်စ်။
ရန်ကုန်မှာ အိမ်ထောင်စုစာရင်းပြန်လျှောက်ဖို့က မလွယ်ဘူးထင်တယ်ဆိုတော့ …. ညဉ်းတို့ အိမ်ငှားစာချုပ်ပြပြီးလျှောက်ပေါ့အေတဲ့။ မကွေးမှာဘဲ ပြန်လျှောက်ရင်ကော မရဘူးလားဆိုတော့ အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရှိမှ အိမ်ထောင်စုစာရင်းလျှောက်လို့ ရမှာပေ့ါတဲ့။ မျက်စိတောင်လည်သွားတယ်။ သူဘဲ အညိုးညိုးတေပြောနေတာလေ။
အိုက်ဒါလဲထပ်ရှင်းပြပါမယ်။ ကျမတို့ မိသားစုနေတာက အမေ့အဒေါ် ကျမတို့အခေါ် ဖွားလေး (အငြိမ်းစားဆရာမ၊ အပျိုကြီး) အိမ်မှာနေတာ။ ကျမတို့ အဖွားအရင်းရဲ့အိမ်မှာက အမေ့ညီအကိုမောင်နှမတေနေကျတယ်။ ဆိုတော့ကာ ကျမတို့ နေတဲ့အိမ်မှာဘဲ အဖွားရဲ့ အိမ်ထောင်စုစာရင်းထဲကို ပြန်ထည့်ချင်ရင်ရော မဖြစ်ဖူးလား ဆိုတော့ …လူမနေဘဲနဲ့ ထည့်ပေးလို့မရဘူးတဲ့ဗျာ။
မရှင်းတာတခုက ဘာလဲဆိုတော့ အိမ်ထောင်စုစာရင်းနဲ့ ပုံစံ ၁၀ ဘာကွာလဲပေါ့။ ပြီးတော့ ရန်ကုန်မှာ အိမ်ငှားစာချုပ်ပြပြီး အိမ်ထောင်စုစာရင်း အသစ်ပြန်လျှောက်ရအောင် ကျမက မိသားစုနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးလေ။ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီးတိုက်ခန်းငှားနေကျတာကိုး။ လ၀က မမပြောလိုက်တာက အိမ်ထောင်စုစာရင်း အသစ်ပြန်လျှောက်ပြီးရင် မနေတော့တဲ့လူတွေကို ပုံစံ၁၀နဲ့ ပြန်ထွက်တဲ့။ ကောင်းရော။ မိသားစု (၇) ယောက်မှာ ပုံစံ၁၀ (၇)ခုထွက်ရမလိုဖြစ်နေပါရောလား။
ဒေါသအထွက်ဆုံးက ဘာလဲဆိုတော့ အိမ်ထောင်စုတခုလုံးကို စာရင်းထဲက ပယ်လိုက်မဲ့ကိတ်စက လွယ်လွန်းနေသလိုဖြစ်နေတာဘဲဗျာ။
ကို့လက်ထဲက အိမ်ထောင်စုစာရင်း မိတ္တူမှန် ဆိုတဲ့ ၂၀၀၁ ရက်စွဲနဲ့ စာရွက်ကြီကို ကြည့်ကြည့်ပြီး စိတ်တေနာတာ မပြောပါတော့နဲ့။
ကိုယ်လိုဘဲ မှတ်ပုံတင်လာလျှောက်တဲ့ သားအဖနှစ်ယောက်အဖြစ်ကလဲ တမျိုးဆန်းတယ်ဗျ။ ကောင်လေးက ဆယ်တန်းဖြေပြီးခါစ ခရီးထွက်မှာမို့လို့ မှတ်ပုံတင်လာလုပ်တာ။ ဖြစ်ချင်တော့ သူ့ရှေ့က အမရဲ့မှတ်ပုံတင် မိတ္တူမပါလာဘူး။ မောင်နှမ ၂ယောက်မှ ၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးသား အမတယောက်ရှိရက်နဲ့ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူမပါလာတော့ နောက်တယောက်ကို မှတ်ပုံတင်မလုပ်ပေးဘူးလို့ ငြင်းလိုက်ရော။ ဒွတ်ခ။
ရြွာ့ပန်တဲ့ ခရီးစင်မှာ အနော့်အတွက် အမြတ်ထွက်တာ… တခုဘဲ…ခိခိ…ရွှေစက်တော်သွားလိုက်ရတယ်။ အဲ…နောက်တခုက ကားလက်မှတ်အဆုံးခံလိုက်ရတယ်။ ပြန်ရမဲ့နေ့မှာ မှတ်ပုံတင် ကိတ်စလုပ်မိတော့ နောက်တရက်မှပြန်ရတယ်။ ဒါလဲတမျိုးကောင်းပါတယ်လေ။ ချစ်သယ်ရင်းတွေနဲ့ တရက်ပိုနေရတာပေါ့။
တော်ဘီ နိုင်ဂံဂျား မသွားဝူး။ ဗမာပြီမှာဘဲနေမယ်။
ဟူး…ရင်မောရပါလား မမပြာ ..
အိုဘယ့် ဆိုရှယ်လစ်အမွေဆိုး ဒွေ..
စကားမစပ် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်တဲ့ကိစ္စ အိပ်ခ်ျတီစီက နည်းပညာကူမတဲ့
ခင်ဗျားဗျာ ……. လွယ်နေတာကို ခက်အောင်လုပ်တယ်
ဂါထာ တစ်ပုဒ်သင်ပေးလိုက်မယ် ။နေတိုင်းရွတ် ကြားလား
ဥုံ … ရေပေး အကုန်ရ
ဂါရဝတရား အမြဲထား …တဲ့ 
ကျုပ်ဖြင့် လူဂျီးတွေ မည်သို့ လုပ်လိုက်သည်မသိ။
နှစ်အိမ်ထောင်ရဲ့ စာရင်းထဲရှိနေတယ်။ (အမွေက ၂ ပုံမရ)
ဒီ လာခါနီးတော့ ဘယ်ဟာသုံးရမှန်းမသိလို့
ပုံစံ ၁၀ ရော ၁၇ရော။
အဲဂလာ ချွေအိလည်း မည်သို့မသိအောင် လုပ်ပလိုက်။ အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ရယ်။
ဒီကလေးမလေး စာမတတ်သေးတာလား အ သုံးလုံးမကြေတာလားအေ
ဒီအရွယ်ရောက်နေပြီ အ သုံးလုံးလေးတော့ ကြေအောင်တော့ကျင့်ကွယ်
အဲဒီ “အ´´သုံးလုံးကြေရင် မြန်မာပြည်အစိုးရရုံး ဘယ်ရုံးသွားသွားတံခါး No ဓား No ပါကွယ်။
အိုက်ရုံးမှာ လာဘ်ပေး ရန်မလို လို့
ခရီးသွားတုံးက အကြောင်းလေးတွေလဲ ရေးပါဦး…
မော်လမြိုင်မြို့က ဧရ၀တီမြစ်ပေါ်မှာ ဇင်ယော်ပျံတာ ယမ်း လှဒယ်..
(မကြည်ပြရဲ့ ၂၀၁၃ခုနှစ်အတွက် အကျော်ကြားဆုံး အဆိုအမိန့်)
အခုတချို့နယ်တွေမှာ မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတဲ့ကိစ္စကို နော်ဝေ NGO တစ်ခုက ကူလုပ်နေပြီ…
လ၀ကက ဒေတာဘေ့စ်တွေကို ခေတ်မီအောင်ပြင်သင့်ပြီ…
ကွန်ပျူတာမတတ်လို့ အလုပ်ပြုတ်မှာစိုးလို့ ကွန်ပျူတာကို မသုံးတဲ့သူတွေ ပြောင်းလဲခြင်းကို လက်ခံသင့်ပြီ…
စိတ်မပူနဲ့အစိုးရက မဖြုတ်ဖူး….
ရှိသမျှ ၀န်ထမ်းတွေကို စင်ကာပူ အိန္ဒိယ စသဖြင့် နီးစပ်ရာရာ တွေဆီ သင်တန်း တက်ခိုင်းဖို့ နောက်ဘက်ဂျက်မှာ ထည့်ဆွဲထားတယ်လို့ သတင်းရထားတယ်….
Dell ပြောတာကတော့ The Power to Do More တဲ့ ..
အမလေး မရွှေအိရယ် ညည်းအဖြစ်ကလဲ ဖတ်ရတာမောထာအေ…
ကျွန်တော် ၁၈နှစ်ပြည့်လဲတုံးကလဲ အဲလိုပဲ… အိမ်ထောင်စုစာရင်းက ပယ်တဲ့အထဲပါသွားလို. တဲ့..
အဲဒါနဲ. ကျွန်တော်က ရန်ကုန်ကနေလာတာပါ… အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါ.. ခဏခဏ မလာနိုင်လို.ပါ ဆိုတော့…….
ညီလေးရယ် မရလို. ပါ.. ရရင် အစ်ကိုက လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့
အဲဒီတော့……. စာအိတ်ကလေး ပေးရဒါပေါ့………
အင်းသူပြောတာလဲ မှန်တာပဲ မရလို.ပါ…..ရရင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်….. အခုတော့ ၁၈နှစ်ပြည့်လဲပီးပီ…
ကျမမျိုးရီး သေးသင့်…အဲလေ သေသင့်ဘာဒယ်
အော်…လမ်းကြောင်း..လမ်းကြောင်း.. ပိန်းလိုက်တဲ့ ငါဘာလားနော်…
အဲဒါ အဲဒါ ဟို စာရွက်အစုတ်တွေနဲ. ဖိုင်တွေရှာခိုင်းကတည်းက သိသင့်တာ.. ပိန်းပအေ….
လက်ခံလိုက်စမ်းဘာ…………. အ သုံးလုံးမှ မကြေတာကို………………
ရွှေအိရေ စိတ်မညစ်ပါနဲ့ အဲလိုထူးခြားဆန်းပြားလှ
တဲ့ ရုံးကိစ္စ တွေအတွက်.. ၀မ်းကွဲမောင်လေး တစ်ယောက်လည်း ဧည့်နိုင်ငံသားကဒ် ကိုင်ထားရလေရဲ့..အဖေ အမေ နဲ့ အစ်ကို အစ်မတွေ အကုန်လုံး နိူင်ငံသားဖြစ်ပြီး သူတစ်ယောက်ထည်း နိူင်ငံ မဲ့လေနေရဲ့ . အဘိုး အဘွားတွေ ငယ်ငယ်ကတည်းက အခြေချနေထိုင်ခဲ့ တဲ့..အဖေ အမေ တွေမွေးဖွား ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့.. နိုင်ငံသား မိဘတွေက မွေးဖွားခဲ့တဲ သားသမီး ငါးယောက်ထဲမှာ သူတစ်ယောက်ထဲ ထူးဆန်းစွာ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်နေလေရဲ့ …
ဟိုတခါ လူကြီး တယောက်ပြောတာတော့ ကြားသား…….
လ၀က ဆိုတာ လာဘ်စားလို့ ရတဲ့ နေရာမဟုတ်ပါဖူးတဲ့…………….
အဲ့ဒါကြောင့် ဒေါ်အိ ဒွတ်ခ ရောက်သွားတယ်…..
ရေလည် ရက်စက်ဒယ် …
ဂယ် .. ဂယ် …
မကွေးပြန်ဒါ လက်တို့ဖော်တောင် ရဝူးးး
ကျုပ်လည်း မကွေးဒါး ခညာရဲ့ …
နောက်ခါ ပြန်ရင် ပေါအုံးးး
နှစ်ပြန်ကြော်လေး မှာရအောင်ရို့ …
ညဉ်းနှယ် ရပ်ကျော်ရွာကျော် နှစ်ပြန်ကျော်မှာရတယ်လို့
ဒါမျိုး များများ အော်ကြစို့။
ဒါမှ ကွန်ပူတာ စနစ် ပြောင်းသုံးပြီး လူတွေလဲ အလုပ်မရှုပ်၊ ကွန်ပူတာစနစ် ရောင်းစားသူတွေလဲ အကျိုးရှိ။
Win-Win ပေါ့။ :hee:
D Form ယူစရာမလို တော့ဘူး လို့တော့ ဖြစ်လာပြီ။
အရီးလတ် ပြောသလို မတ် ၁၅ က စပြီး ဒီဖောင်း မလိုတော့ဘူးတဲ့ ကောင်းတာပေါ့
သူ့ထက် ကောင်းဘို့ ပုံစံ ၁၇ ၊ ၁၉ တို့ လဲ ဖြုတ်ဘို့ကောင်းနေပြီ
အဲဒါတွေက ဒီဖောင်းလုပ်ရတာထက် အလုပ်ပိုရှုတ်တယ် ပိုကုန်တယ်
လူတိုင်း အတိအကျ အခွန်ဆောင်ရတာမျိုးလဲ မဟုတ် သူ တို့ လွှတ်ပေးချင်ရင် ဘာမှ မဆောင်ပဲနဲ့လဲ ၁၇ ၁၉ ရနိုင်တာပဲ
အိမ်ထောင်စု စာရင်းကတော့ လွယ်ချင်တဲ့ သူ အတွက် လွယ်ပြီး ခက်ချင်တဲ့ သူ အတွက် တကယ်ခက်တာပဲ
တကယ် ဆို ဒေါ်ရွှေအိ တို့ အိမ်ထောင်စု ကနေ အိမ်ထောင်ပြု တဲ့သူက ထွက်စာလုပ် ဟိုဘက်မှာ အသစ် အိမ်ထောင်စု လျှောက်/ ပြန်ဝင် လုပ်ရမှာ ၊ အခုတော့ ဒီ အိမ်ထောင်စုထဲလဲ ရှိ
ဟို အိမ်ထောင်စုထဲလဲ ပါနဲ့ တွေ့ဘူးတဲ့ တစ်ယောက်ဆို လူ တစ်ယောက်ထဲ အိမ်ထောင်စု စာရင်း လေးခုထဲ ပါနေတယ် အဲဒီစာရင်းအတိုင်း ယူလိုက်ရင်တော့ လူဦးရေတွေ ပိုနေတော့မှာပဲ
လူမျိုး ဆိုလဲ ဥပမာ ဗမာတရုတ် ကမွေးလာတဲ့ ကလေး တွေ မျိုးဆက် သုံးခုလောက် ဗမာ နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုလဲ နောက်ဆုံး မွေးလာတဲ့ ကလေး ရဲ့ လူမျိုးက ဗမာတရုတ် ဖြစ်နေသေးတာပဲ
ရွှေအိရယ် လဆန်းပိုင်းက ဦးချို မကွေးမှာရှိတယ် ဖုန်းဆက်လိုက်ရောပေါ့
ကိတ်စမရှိပါဘူး ရန်ကုန်မှာပုံစံ(၁၀)၀င်ချင်ရင် ဦးချိုကြီးမွေးစားသမီးဆိုပြီး
ရွှေအိရေ အဲဒိရုံးမှာလက်နှိပ်စက်သုံးနေတုန်းလား အဟိ …။ တို့များဆီတော့ ဘယ်ရုံးဝင်ဝင် ကွန်ပူတာစာစီနဲ့မှ….။ ကွန်ပူတာဆိုင်ဒွေ အလုပ်ဖစ်တာပေါ့အေ…………။ စစ်တောင်းနဲ့မရ၀ူး ရွက်လှေနဲ့မှ….။ ပြီးမှသာ အမှိုက်ခြင်းထဲရောက်ကုန်တာ ….။
နာလည်း…ဗမာပြည်မှာဘ ဘဲ နေဒေါ့မယ်…ဟာ
ကဲ . . မတူ တာ လေး မန့်ဦးမှ . . ကျုပ် သန်းခေါင်စာရင်းလုပ်တော့ . . ဟိုဘက်မြို့ နယ်ကအထွက်၊ ဒီဘက် မြို့ နယ် အ၀င် . . တစ်ရက် ထဲပြီးတယ် . . အလုပ်အကိုင် နေရာမှာတော့ အလွတ်တန်းသတင်းထောက် လို့ ထည့်ပလိုက်တယ် . . . ကင်မရာကလဲ အဆင်သင့် ကိုး . . . . တပြား မှ မပေးခဲ့ရဘူး . . ဆေးလိပ် သောက်ပါဦးဆိုတာတောင် သောက်ဘူးဗျ . . . .သူကတောင် ကွမ်းပြန်ကျွေးနေသေး . . . ဘာလို့ မှန်းတော့ သိပါဘူးဗျာ . . ကဲ အဲ့ဒါထား . .တော့ . .
အစိုးရ ၀န်ထမ်းတွေမှာကလဲ . . ဒီလို လုပ်ရင် ဒီလို အပြောခံ ရမယ် ဆိုတာ သိပေမယ့် လဲ . . အသက်အရွယ် နဲ့ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ အရ . . ဒီအလုပ်ကနေ တခြား အလုပ်လဲ ပြောင်းမလုပ်တတ်၊ လုပ်လဲ မလုပ်ချင် . . (မနက် ၁၀ နာရီ မှ ရုံးတက်ရတဲ့ အရသာ ကိုကြိုက်နေတာလဲဖြစ်နိုင်) ဆိုတော့ . . ဒါမျိုး မှ မလုပ်ရင် လဲ . . . . မိသားစု ဘာနဲ့ စားမလဲ .. .. .. ကလေးတွေ ကျူရှင်ဖိုးက လဲ ရှိသေး . . ဆိုတော့ . . . . . အဲ့လို တိတိကျကျ ဖြစ်ချင်ရင် . . ၀န်ထမ်း တခုထည်းကို ကြပ်မတ် ပေးလို့ မရဘူး . . . . လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလုံးကို ကြပ်မတ် ပေးမှ . . . . . ဆိုတော့ . . . . . . . လက်နှိပ်စက် သုံးတာက မီးမလို ဘူးလေ . . . . ကြီးဒေါ် ရဲ့ . . . .
ခဏလာနေသူတွေအတွက်.. ကျောင်းသားကဒ်..။ အလုပ်လုပ်ခွင့်ကဒ်.။ ပြည်နယ်အိုင်ဒီ..။ ဒရိုင်ဘာလိုင်စင်..။ ဆိုရှယ်စကရီတီ..။ ခရက်ဒစ်ကဒ်..။ ဘဏ်ကဒ်.. ။ ဂရင်းကဒ် ..။ ခရီးသွားလက်မှတ်..။ စာကြည့်တိုက်လက်မှတ်..။ အာမခံလက်မှတ်… စတာတွေနဲ့ရှိနေတာ…
၁၇- ၁၉ ကို ဖြုတ်ပေးတော့မယ်လို့တော့ ကြားတာပဲ…
၁၇ – နယ်ဈေး ၃၀၀၀၀-၄၀၀၀၀ ၀န်းကျင်ပါ ။ ကိုယ်တိုင်လုပ်စရာလဲမလိုပါဘူး။ ဆိုက်ကားသမားကို ခိုင်းလို့ရပါကြောင်း။
တကယ်တော့ အဲဒါလဲ ထမင်းစားလို့မရတဲ့လစာနဲ့လုပ်နေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက် တိုင်းပြည်ကိုယ်စား ကိုယ်က ဖြည့်စွက်ထောက်ပံ့ တာလို့ စိတ်ဖြေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်က နိုင်ငံတော်ကို အခွန်ဆောင်တဲ့အခါကျတော့ အဲဒါမျိုးပေးခဲ့ရကမ်းခဲ့ရတာတွေအတွက် လျှော့ဆောင်ပေါ့နော….
ဒါကြောင့် စလောင်းရွဲ့နဲ့သာ ဖုံးလို့ရနိုင်ပါကြောင်း……
Credit to >>Eleven.
မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့မှစတင်၍ ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာမည့်သူများ နိုင်ငံကူး လက်မှတ်ပြုလုပ်ရာတွင် ပုံစံ (၁၉) နှင့် D-Form တို့လျှောက်ထားရန် မလိုအပ်တော့
မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာမည့်သူများ နိုင်ငံ ကူးလက်မှတ် ပြုလုပ်ရာတွင် ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ကင်း ရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် ပုံစံ(ဂ) ပထခ(၀င)-၁၂ (ပုံစံ-၁၉) နှင့် D-Form တို့ လျှောက်ထားရန် မလိုအပ်တော့ကြောင်း နိုင်ပိုင်ငံပိုင် မီဒီယာဖြစ်သည့် မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားတွင် မတ်လ ၁၃ ရက်ည ၈ နာရီ သတင်းကြေညာချက်အရ သိရသည်။
ပြည်ပထွက်ခွာမည့်သူများ အနေဖြင့် ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် ပုံစံ(ဂ)နှင့် D-Form တို့ လျှောက်ထားရခြင်းများကြောင့် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်ခြင်း၊ ငွေ ကုန်ကြေး ကျများခြင်းနှင့် အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းခြင်းတို့ကြောင့် ရယူရန် မလိုအပ်တော့ကြောင်း သတင်းကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာမည့်သူများအားလုံး (အခွန်ကြွေးကျန် ရှိသူများမှအပ) အနေဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် ပုံစံ (ဂ) ပထခ(၀င)-၁၂ ထောက်ခံချက်အား မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရယူရန် မလိုအပ်တော့ကြောင်းနှင့် ပြည်ပသို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထွက်ခွာမည့်သူများ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် ပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ပုံစံ (ဃ) D-Form ကို ဖြည့်စွက်လျှောက်ထားပြီး မှန်ကန်ခွင့်ပြုချက် ရရှိမှသာ ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာခွင့်ရရှိကြောင်း၊ ယင်းပုံစံ လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူ့လူထုတွင် ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာမည့်သူတိုင်း နိုင်ငံခြားသားနှင့် နိုင်ငံသား မည်သူမဆို မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဖြည့်စွက်လျှောက်ထား တောင်းခံရန် မလိုအပ်တော့ကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာနမှ သတင်းရရှိသည်ဟု မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားတွင် ကြေညာသွားခဲ့သည်။
“ပတ်ဖို့ရဖို့အတွက်ကို ပုံစံ (၁၉) လုပ်ရတာ တော်တော်အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းပြီး ငွေလည်း ကုန်ပါတယ်။ လူလည်း တန်းစီရတယ်။ အဲဒီကြားထဲ မသိတဲ့ သူတွေဆိုရင် ပွဲစားတွေရဲ့ အလည်လည်း ခံရနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်ပုံစံ (၁၉) သွားထုတ်တော့ ကိုယ့်ရှေ့မှာတင် ပုံစံ (၁၉) လာလုပ်တဲ့သူကို ပွဲစားက လုပ်ပေးမယ်ပြောပြီး ပိုက်ဆံတွေ ပိုတောင်းသွားတဲ့ဖြစ်ရပ် ကြုံခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် ပုံစံ (၁၉) က အရင်ကတည်းက ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့သင့်တာပါ။ ပုံစံ ၁၇ လည်း ပယ်ဖျက်ပေးသင့်ပါတယ်။ D-Form ကတော့ ငွေကုန်ကြေးကျ နည်းပေမဲ့ အချိန်နည်းနည်းပေးရတယ်” ဟု မကြာသေးမီက နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားခဲ့သူတစ်ဦးက သူ၏အတွေ့အကြုံကို ပြောပြခဲ့သည်။
အဲ့လာ ဘာပျော့စ် တာတုန်းးးး
အန်။ ဘာမှ ဟန်မအိုဗာ ဘူး။
အဲဂလာ ကျုပ်လဲ ကော်ပီ/ပေ့လာတာ။
မြဝတီ နရူး က။
ဖြစ်ချင်းဖြစ် ဟန်အိုဗာက သူတို့ဖြစ်။
ညည်းဟာက ရှုပ်နေတာပဲအေ.. နေစရာမရှိ ဦးကြောင်ကြီးအိမ်လာခဲ့… နေဖို့အပြင် ထမင်းလည်းကျွေးမယ် နှိပ်လည်းပေးမယ် ဈေးသုံး ပိုက်ဆံလည်းပေးမယ်… ဒါထက်ကောင်းတဲ့အိမ် ရှိအုံးမလား…
ညင်းးးး ညင်းးးး သိနေတယ်လေ။
ရွာထဲမှာ ကိုယ့်ထက်ဦးနှောက်ကြီးသူတွေ အများရီးဆိုတာ…
အကြံကောင်း ဥာဏ်ကောင်း ၀ိုင်းပေးကြတဲ့ ဦးဦးဒေါ်ဒေါ် ကိုကို ယောက်ခမ မမ ညီမငေး
များဆီက အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတ လမ်းကြောင်းခင်းနည်းများ
မှတ်ချက်။ ။ အောင်ကျူး မပါ
ရွှေအိ တစ်ယောက် နိုင်ဂျံဂါး သွားဖို့တောင်လုံးပမ်းနေပြီကိုး…
လ၀က အကြောင်းတော့ ပြောမဆုံးပေါင်တောသုံးထောင် ပါကွယ်..
စာရွက်စါတမ်းတွေ စုံနေပါရက်ကယ်နဲ့ “ခဏနေအုံး..ရှင့်ဖိုင်က အပုံကြီးထဲမွှေရှာရမှာ..”
ဆိုပီး တခြားသူတွေကိစ္စလုပ်ပေးနေတော့တာကိုး…တော်တော်ကြာတော့ ကျုပ်က
ဖိုင်ကျနော် ကူရှာပေးပါ့မယ်ဗျာ…ဆိုတော့မှ “ဒါဆိုလာ..ဖိုင်လိုက်သယ်ပေး”
ဆိုပီး ဖိုင်စင်တွေကြားခေါ်သွားပြီး…“ဦးစီး ကိုကန်တော့ရမယ်”တဲ့
ကျုပ်ဆိုတဲ့ ငအ ကလည်းအဲလိုဒဲ့ ပြောမှ သဘောပေါက်ပြီး…ဘယ်လောက်လဲမေး..
နာရီ ၀က်လောက်အတွင်း ပြီးသွားတော့တယ်…
တစ်ခါတုန်းက ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ လုပ်ဖို့ဖြစ်လာတော့….
ရပ်ကွက်က ရဲစခန်းထောက်ခံစာပါမှ ရမယ်ပြောတယ်။
ရဲစခန်းသွားတော့ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာပါမှ ရဲစခန်းထောက်ခံစာပေးမယ် ပြောတယ်။
ဒီတစ်ယောက်ကို ဒီလို ရစ်၊
မရိုးနိုင်အောင် ပညာတွေ ပေးတတ်ကြတယ်။
အဲဒါကြောင့် နောက်ပြန်မလှည့်ဖို့ ပြောနေကြတယ်။
ဘာ ဘာ ဘာမှ မပြောင်းလဲသေးဘူး။ :buu:
ထောက်ခံစာအကြောင်းကြားလို့ ပိုစ့်နဲ့သိပ်မဆိုင်ပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀)နှစ်လောက်က အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်…
အခုတော့ ရတနာပုံတယ်လီပို့ပေါ့ဗျာ… အဲဒီတုန်းက ပုဂံဆိုင်ဘာတက်ခ်…
ADSL လိုင်းလျှောက်ရင် ၁၅သိန်းသွင်းရတဲ့အချိန်…
ကျွန်တော်လဲ အင်တာနက်လိုင်းကိစ္စနဲ့ အဲဒီကိုရောက်နေတာပေ့ါ…
အဲဒီအချိန်မှာ ၀တ်ကောင်းစားလှနဲ့ ပညာတတ်ပုံစံမျိုးအမျိုးသမီးတစ်ဦးရောက်လာပါတယ်…
သူကလဲ ADSL လိုချင်လို့လာလျှောက်တာပါ…
အဲဒီမှာ ၀န်ထမ်းအမျိုးသမီးလေးက လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုပြောပါတယ်… အဲဒီမှာ…
ADSL လျှောက်ဖို့ ရဲစခန်းထောက်ခံစာလိုတယ်လို့ပြောတဲ့အခါ…
“ကိုယ့်လောက်မှစာရိတ္တမကောင်းတဲ့ကောင်တွေဆီကများ ထောက်ခံစာတောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်… အိမ်မှကွယ် ADSL မတတ်ရုံပဲရှိတာပေ့ါသမီးရယ် ” ဆိုပြီး ထပြန်သွားတာကို မြင်ခဲ့ဖူးပါတယ်…
ပျံလာမယ် … နွက်ဖန်မှ …
ပုံစံ၁၇ တို့ ဘာတို့ 
ငွေရှာဖို့ ပဲ ကျန်တော့တယ်ကွဲ့ 
ဒေါ်ရီးရေ … လ၀က အရစ်ခံလိုက်ရတာ .. ခုထိ ကျုပ်ရင်ထဲ အခဲမကျေသေးဘူးဗျို့ ..
ငယ်ငယ်ကတည်းကပါ စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတဲ့ အစိုးရ ဌာနတွေ နဲ့ ဆက်ဆံရမှာကြောက်လို့ ကျုပ် ပတ်ပြေးနေတာ ၊ ဆယ်တန်းဖြေပြီးတဲ့အထိ ကျုပ်မှာ မှတ်မပုံတင် မချိဝူးတော့ …. ။ ပြောရလျှင် 10 နှစ်ပြည့်မှတ်ပုံတင်လည်း ချိဝူး …. 18 နှစ်ကျော်ပြီး 20ရောက်နေပြီ မှတ်ပုံတင် လုပ်ရတေးဘူး .. ခရီးတွေထွက်လျှင် ဒီလိုပဲ လူကြီးတွေ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးတော့ ခရီးထွက်လို့တော့ရတယ် …. ။ ဒီတိုင်း မှတ်ပုံတင်မရှိပဲ နေရင်းက … ရပ်ကွက်ထဲ … မဖြစ်မနေ လုပ်ရတော့မယ်လို့ စီမံချက်နဲ့ လာတော့ … အများနဲ့တွဲပြီး လုပ်လိုက်ပါတယ် .. ဘာမှ ကုန်ဝူးအေ … 18နှစ်ပြည့်မှတ်ပုံတင် တန်းရတယ် …. ။ ဒါပေမယ့် အသက်30မှာ တခါ ပြန်လဲရမယ်ဆိုတဲ့ စာကြီးပါတယ် … ။ ပိုက်ဆံလည်း ကုန်ဘူး … 2ရက်လောက်ပဲ လူကိုယ်တိုင် လိုက်ရတဲ့ စီမံချက်နဲ့ ရပ်ကွက်အလိုက် လုပ်ပေးတာမို့ …. သဘောကျကောင်းတုန်း ၊ မှတ်ပုံတင် လက်ထဲရောက်မှ …. မွေးသက္ကရာဇ်မှားနေတာတွေ့ ပါရော … ၂ရက်နေ့ မွေးတာ ၂၁ရက်လို့ မှားရေးတယ်လေ … ။
ဒါနဲ့ ရုံးက မထွက်ခင် မှားနေလို့ ပြင်ပေးပါပြောတော့ …. ပြင်ပေးပုံက … ပိုနေတဲ့ ၁ကို ဓါးနဲ့ခြစ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ မှတ်ပုံတင်ကြီးမှာ ဓါးနဲ့ ခြစ်ထားတာ မသိသာပဲ နေမလားအေ … ။ ဒါနဲ့ ကျုပ်လည်း မှန်ကန်ကြောင်း အထောက်ထားအနေနဲ့ ပြင်ထားတဲ့ ဘေးမှာ လက်မှတ်ထိုး ခိုင်းရော … မှားရေးတဲ့ စာရေးမကိုပေါ့ … ။ မထိုးပေးလျှင် ကဒ်အသစ်တစ်ခု ပြန်ရေးပေး ဘာညာ ထဖြစ်တော့တာပေါ့ ။ သူကလည်း ကဒ်အသစ် မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး ၊ ပြင်ထားတာကလည်း မသိသာပါဘူး ပလက်စ်စတစ်လောင်းလိုက်ရင် အုပ်သွားမှာ ဘာညာနဲ့ ချွေးသိပ်လွှတ်ပေမယ့် … ။ ကိုယ့်လက်ထဲ ရောက်ရောက်ချင်း ပြင်ဆင်ထားပြီးသား စင်းလုံးချော မဟုတ်တဲ့ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကို ကိုင်ပြီး ပြန်လာဖို့ … စိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါဘူးလေ … ။ ဒါနဲ့ … ရှင်နဲ့ မပြီးရင် ဘယ်သူနဲ့ ပြောရမလဲ ဆိုတော့ … ဦးစီးနဲ့ ၀င်တွေ့တော့ ၊ ဦးစီးကလည်း … ကျုပ်ကို ဒီတိုင်းပဲ ပြန်လွှတ်ပါတယ် … သမီးရယ် ကဒ်အသစ်ထုတ်ဖို့က မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ ရပါတယ် တခြား လူတွေလည်းဒီလိုပါပဲ ဆိုပြီး ။ ဒါနဲ့ပဲ .. မယူချင် ယူချင်နဲ့ ပြန်လာခဲ့တယ် … ။
နှစ်နည်းနည်းကြာလို့ ၊ ပက်စ်ပို့စ် သွားလည်း လုပ်ရော ၊ အရစ်ခံရတော့တာပါပဲ ။ ကျုပ်ကို မွေးသက္ကရာဇ်ပြင်ထားပါတယ်ဆိုပြီး ထဖြစ်ရော ၊ 2ရက်နဲ့ 21ရက်ဟယ် .. ပြင်စရာလား …ဦးနှောက်မရှိပုံများ ပြင်လိုက်တော့ရော အသက်ဘယ်လောက် ကွာသွားမှာမို့လဲ … တခြားသော documentation တွေမှာ အကုန် 2ရက်တွေ ချည်းရေးထားတာ သူတို့ လည်း အမြင်ပဲ … ဒါနဲ့ ….. ကျုပ်ကို …..လ၀က ပြန်လွှတ်ပြီး ထောက်ခံစာ သွားလုပ်ခိုင်းပါတယ် ။ တခါ ထောက်ခံစာ သွားလုပ်တော့ ဟိုစာရေးမတော့ ရှိသေးပေမယ့် ၊ ဦးစီးကတော့ တခြား လူဖြစ်သွားပြီ ၊ ကျုပ်က ကွန်ပလိန်းမတက်လို့ မလဲပေးတာ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အပြောမျိုးပြောပြီး ၊ 2ရက်နေ့ ဟုတ်မှန်ကြောင်း ထောက်ခံစာတော့ ရေးပေးလိုက်ပါတယ် ။ နောက်တော့ မှတ်ပုံတင်အသစ်လဲရမယ်ဆိုပြီး ပြန်ချိန်းလိုက်တယ် ။ ပက်စ်ပို့စ်ကိစ္စပြီးသွားတော့ … နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း အထောက်ထားဖြစ်တဲ့ မှတ်ပုံတင် အရေးကြီးကြောင်း အမေ က ပွစိပွစိ လုပ်တာကြောင့် နားပူပူနဲ့ သွားလဲခဲ့ပါတယ် ။
စိတ်ကို အရှည်ဆုံးထားလို့ ၊ အလုပ်ကနေ အချိန်ခဏပေးထွက်ပြီး ဖြည့်စရာရှိတာ ဖြည့် ဘာညာ အကုန်ပြီးတော့ ၊ မှတ်ပုံတင် အဟောင်းကို သူတို့ကို ပေးထားခဲ့ရတယ် ။ ဖောင်ဖိုး ဘာညာတော့ တောင်းတဲ့ အတိုင်းပေးခဲ့တာပဲ … ။ ချိန်းတဲ့ ရက်ပြန်သွားတဲ့ အခါ မရသေးဘူးနောက်ရက်ပြန်လာပါတယ် ။သူတို့ ဆီသွားတာ ကျုပ်တို့ အပြင်က ကမ်ပဏီတွေလို ဟုတ်ဘူးအေ့ … အလုပ်လာတာ ဆယ်နာရီကျော်မှ 11ခွဲလောက်ဆို ထမင်းစားတယ် လူရှိရှိမရှိရှိနော် .. စောင့်ပလေ့စေဆိုပြီး စားနေတာ … ပြီးလျှင် စာလေးသုံးလေးလုံးရေးပြီး ….. တီးတိုင်း ဆိုပြီး ထွက်သွားပြန်ရော ရုံးဆင်းတာ လေးနာရီ စွန်းစွန်းလောက် …. ကျုပ်လည်း ဆင်ပြောင်ကြီး အမြီးရောက်မှ အတစ်မခံနိုင်တော့တာနဲ့ … တော်တော်လေး စိတ်ကို ချုပ်တီးပြီး နောက်တကြိမ်ထက်သွားပါတယ် .. ဒုတိယ အကြိမ်ပါ ။ အဲ့အခါကျတော့ ဦးစီးမရှိဘူးတဲ့ နေပြည်တော်သွားနေလို့ နောက်မှ ပြန်လာပါတဲ့လေ … ။ နောက်မှ ဆိုတာ ဘယ်တော့လဲ တလလား တပတ်လား ဆယ်ရက်လား မေးတော့ မသိဘူးတဲ့ …. ဒါဆို သတ်သတ်ရစ်မှန်း ကျုပ်နပ်သွားပါပြီ ။ အတော်တော့ ချဉ်သွားတယ်အေ .. ဒါနဲ့ပဲ တတိယအကြိမ် အရူးလုပ်မခံတော့ဘူး ဆိုပြီး မှတ်ပုံတင်အဟောင်းလေးကို သုံးစရာရှိလို့ ပြန်ပေးပါ တောင်းပြီး …. ခုထိ … အသစ်ကို သွားပြန်မယူတော့ဘူး ။
ပြင်ရာပါတဲ့ တခုကိုပဲ လက်ထဲ ကိုင်သုံးနေတုန်းပြသနာ မရှိသေးဘူး … ။
အလုပ်မလုပ်တဲ့ အစိုးရ ဌာနတွေနဲ့ ပတ်သတ်ရမှာ သေမလောက်ကြောက်ပေမယ့်… မဖြစ်မနေ ပတ်သတ်ရဦးမယ် ။ ပက်စ်ပို့စ် သက်တမ်း တိုးရတော့မှာပါ … တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဂနေ့ပဲ သက်တမ်း ကုန်သွား ဘီ …. ။ စိတ်လေတယ် … ထပ်ရစ်ခံရပြီး မြို့နယ် လ၀ကနဲ့ ထပ်ပတ်သတ်ရဦးမလား ဆိုတာကတော့ …ဟူးးးးးးးးး
မှတ်ပုံတင်မှာ အလုပ်အကိုင်က စာရေးဆရာ။
ဘာရေးလည်း မေး . နိုင်ငံရေးသတင်း၊ ဆောင်းပါး၊ အက်ဆေးရေးတယ်လို့ ဂျာနယ် မဂ္ဂဇင်း အစုံပဲလို့ ဖြေလိုက်တယ်။
ညီလေး အဆင်ပြေသလောက်ပဲ ထည့်သွားပါကွာတဲ့
ကိုယ်တောင် ပြန်သနားမိသွားတယ် ။
ကျနော်လဲ အိုက်ဒီယာ ရသွားဘီ။
အလုပ်အကိုင် မန်းဒလေးဂွဇွတ် စီဂျေ
မြင်မြင်ကရာ ဒါ့ပုံရိုက်ပြီး ပြန်ဖွသည်လို့ ပြောလိုက်ရင်
ဘာအလှူငွေမှ မထဲ့နဲ့ လိုတာရရင် ပြန်တော့ လို့များ ပြောမလား မသိဝူးနော်